Karaa gabaabaan kiiboordiitti akka itti fayyadamtu - Gaachana Sabaa
September 8, 2017 October 21, 2017 Gaachana Sabaa
Compitara keenya fayyadamuuf kiibordiin baayyee barbaachisaa dha.Compitara banuudhaafuu jecha icciitii kee barreessuudhaan jalqabda. Barreeffama barreessuun ala shaffisaaf karaa gabaabaaan hojiikee raawwachuuf kiboordiin mala dhiimma itti baanu hedduu qaba.
Haa tahuu malee hedduun keenya muraasa malee hin beeknu. Kan beeknu yoo jiraate muraasa qofaadha. Compitara kee kan fayyadamtu yoo manatti dhuunfaa keetiin viidiyoo fii taphaaf qofa tahe hangas cinqamuun hin feesisu,Baruun garuu nama hin ajjeesu.
Haa tahuutii yoo hojii guddaa biiroo keessatti argattehoo ykn ammoo hojii mataa keetii kan yeroo baay’ee barreessuudhaan kan dabarsitu yoo tahe guutumatti yoo hin barrellee muraasa akka itti fayyadamtu baruun barbaachisaa taha.
Yeroo qusachuu fi dadhabbii hambisuuf mala karaa gabaabaatti fayyadamuun haala siif salphisuu qofaaf osoo hin taane nama birattis akka oogummaa qabdu mullisa.Kiboordii ilaalchisee dhihoo kana wanan baradhe keessaa muraasa asiin gaditti kaheera baradhaa,warri beektan beekumsaaf itti nuuf dabalaa.
Fn + Backspace Ctrl + Del Cmd + Backspace
Go to top of the page Home Home
Move up one frame Page Up(pg up) Fn + Up Arrow
Scroll down a frame Space or Page Down(pg dn) Space or Fn + Down Arrow
Scroll up a frame Shift + Space or Page Up(pg up) Shift + Space or Fn + Up Arrow
Select paragraphs to the right Shift + Ctrl + Down Shift + Ctrl + Down
Make video full screen or return to default F
Mute video sound Space or M
Stop video from playing (pause) or Play again K
Rewind by ten second (back by ten second) J
Forward by ten second L
← Israeli jets reportedly strikes Syrian military facility
Kakuun bara kanaa maaf akkana bushooftee/ rakastee? →
Barnoota maallaqa malee Online baradhu
October 27, 2017 Gaachana Sabaa 1
October 7, 2017 Gaachana Sabaa Comments Off on Weebsaayitoota maallaqa malee Isportii online dabarsan keessaa muraasa
Akkaataa interneetii irratti icciitii kee eeggachuu dandeessu.
November 7, 2017 Gaachana Sabaa Comments Off on Akkaataa interneetii irratti icciitii kee eeggachuu dandeessu.